Hollywood Vanity Factory - China Hollywood Vanity mpanamboatra, mpamatsy
Hollywood zava-poana YF-D-1
Asongadino ny faritra vaninao amin'ny Natalie ambony! Mampiseho talantalana fampisehoana ho anao hanehoana ireo kojakoja zava-poana. Ny Natalie dia manana vatasarihana roa lehibe izay asongadin'ny bokotra Crystal Lux Drawer Knobs. Tonga miaraka amin'ny fononteny fanoherana ny tendrony izay mety apetraka ao aoriana ho fiarovana anao. Screws sy dowels rindrina plastika dia ampidirina amin'ny fametrahana!
Hollywood zava-poana YF-C-1
Fitaovana fitehirizana zava-poana ho an'io fiheverana tsara tarehy io amin'ny setrinao zava-poana! Mahafinaritra raha maniry hanana azy io ho tsy miankina sy matanjaka ianao hanohanana ny Makeup Vanity Tabletop anao. Ahitana vatasarihana malalaka izay misongadina miaraka amin'ny bokotra vatasaranga kristaly.
Mpantsaka sary vetaveta Hollywood Vanity Mirror with Bulbs and Desk Set Black 5 no mila miatrika olana amin'ny habakabaka ao amin'ny trano kely misy anao? Efa nitady zorony manokana ve ianao? Ianao ve mila toerana bebe kokoa hitahirizana ireo makiazy, ranomanitra
Vatasarihana YF-HY-4 8
Mpantsaka 8 Mirror Hollywood Vanity Mirror miaraka amin'ny takamoa sy birao napetraka mainty Ity Hollywood Glam Set ity dia manana izay ilainao rehetra sy bebe kokoa.
Vatasarihana YF-HY-3 3
Volavolan-tanana tsara tarehy, ny fitaratry ny mpivarotra faran'izay lafo vidy dia misy toha-kirika tsy voatery handravaka ny latabatra zava-poana, na hametahana azy amin'ny rindrinao sy ny asa izay mijery isaky ny miditra ao amin'ny efitrano ianao.
Vatasarihana YF-HY-2 11 tsy misy vera
Amin'izao fotoana izao, ny latabatra zava-poana dia mifaninana amina fanaka avo lenta momba ny vidiny. Tsy misy olona hisakana ny olona tsy hahazo raha mahay mandany zava-poana. Raha sendra mitady zava-poana ianao izao dia faly aho manondro safidy roa.
Vatasarihana YF-HY-1 13
Fanambarana faratampony amin'ny fahamendrehana tsy misy dikany, mampiseho ny Frame Hollywood misy patanty tsy manam-paharoa, tena tsara tarehy, ary endrika maoderina mamirapiratra marika vaovao amin'ny glamor any Hollywood sy ny fahatsorana tsotra izay nahatonga ny olona tia olona makiazy, mpomba sy mpibilaogy hatsaran-tarehy ho tia. Manateza tompona faly an'arivony ary avelao ny famirapiratanao isan'andro!